Portrait mhedzisiro yeiyo iPhone 7 Plus pane chero imwe iPhone, zvinogoneka nekuda kweizvi maapps | IPhone nhau
Kubva 2014, gore rakatanga Apple kutanga kuvhura 4.7-inch uye 5.5-inch chishandiso, iyo iPhone Plus yauya neakawedzera maficha maficha pane mukoma wayo mudiki. Muna 2016, rinonakidza basa reiyo iPhone 7 Plus iri, pasina mubvunzo, mbiri kamera iyo, pakati pezvimwe zvinhu, inotibvumidza kuti tiite inozivikanwa portrait mhedzisiro pane zvakawanda zvataurwa kubvira payakatangwa. Asi chinhu ichi chinosarudzika kune iyo iPhone 7 Plus? Hongu… kana kwete kana tikashandisa wechitatu bato Software.
Kunyangwe zviri pachena kuti isu hatigone kuzadzisa chero chinhu chinoda chakakosha Hardware tichishandisa imwe software, mune ino posvo isu tichataura nezvayo mafomu matatu anotibvumidza kutevedzera zvinoitika portrait yeiyo iPhone 7 Plus, uye izvi zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa pane chero chinhu chinowirirana, kuti tikwanise kuita izvi nekusanzwisisika kumashure pane, semuenzaniso, iyo iPhone 5s.
1 Portrait mhedzisiro nePatch
2 Portrait mhedzisiro naFabFocus
3 Kudzika Migumisiro
Portrait mhedzisiro nePatch
Yekutanga yezvikumbiro zvatichataura nezvazvo ndeye chigamba, app yandaishandisa kugadzira mufananidzo uri pamusoro. Kushandiswa kwaro kuri nyore kwazvo: tinogona kutora kana kuvhura pikicha yemufirimu wedu, mucherechedze zvatiri kuda kuti zvirambe zvakajeka uye tisiye zvisina chiratidzo kuti chii chatinoda kuve chakakanganiswa nemidziyo miviri iripo (bhurasho uye bvisa). Mushure mekugadzirisa kwapera, kugadzira mifananidzo kunotora masekondi.
Pane zvinhu zvakati wandei zvandinofanira kutsanangura nezve chishandiso ichi: chekutanga ndechekuti, kana tikasatenga kutenga kwakabatana kwe € 1.99, tichaona watermark kurudyi repazasi inoti "PATCH". Chechipiri ndechekuti Iyo ine otomatiki modhi yekufungidzira kuti tingade sei kuti mufananidzo ubude, asi iyi otomatiki modhi inorova zvishoma pane yakamira wachi iyo inorohwa kaviri pazuva. Chinhu chechitatu chandingade kutaura ndechekuti mufananidzo uri pamusoro unogona kuvandudzwa; Ini ndakuita kuti ikurumidze kuiisa mune ino positi, asi zvinozobuda zvirinani zvakanyanya patinonatsa sarudzo yedu.
Ah, uye chimwe chinhu: zvine musoro, isu tinogona zvakare kushandisa iyi application ku shandisa iwo portrait mhedzisiro kumifananidzo yatakatora neiyo iPhone 7 Plus pasina izvi.
Portrait mhedzisiro naFabFocus
FabFocus chikumbiro chisingape yemhando yemahara, asi iyo otomatiki maitiro ari nani kwazvo kupfuura iko kwekutanga kunyorera. Shandisa mubatanidzwa we kumeso kuzivikanwa uye kuzivikanwa kwemari kuziva izvo zvekuburitsa pachena uye chii cheku smudge. Asi, sezvo zvichinetsa kuti mhedzisiro ive yechokwadi pasina yakakosha Hardware, isu tinogona kuzopedzisira tadzvanya pane "Hora" bhatani kurodza sarudzo zvishoma.
Chinhu chakashata ndechekuti tekinoroji iyo inovandudza kuzivikanwa kwechinhu inouya pamutengo uye FabFocus iri inowanikwa muApp Store ye € 2.99. Ehezve, zvine musoro pasina chero watermark uye iine nyeredzi shanu maererano nemaonero evashandisi.
FabFocus - Portrait Mode Blur4,49 €
Uye isu tinopedzisira tave neapp inogona kuita zvakatowanda kupfuura iyo iPhone 7 Plus inoita nekamera yayo. Kudzika Mhedzisiro chikumbiro chinozo shandura kumashure, asi neimwe nzira: iyo app inoshandisa anamorphic kudzika kwemunda uye cinematic bokeh, iyo inozopedzisira yaratidza chaiyo chaiyo mhedzisiro, zvakanyanya zvekuti ndiyo yega App Store application yekuzvizadzisa.
Vashandisi tinogona kuwedzera kana kudzikisira kusimba kwechiitiko kutsvedza pa mubato uye tinokwanisa kushandisa minwe miviri kugadzirisa nzvimbo huru yemufananidzo asi, sezvingatarisirwa, tinopedzisira tave kutsanangura sarudzo nemaoko kubva kubhatani re "Tsika" rinotibvumira kutanga kubva pakutanga kusarudza izvo zvinotifadza. .
Pamusoro pekukanganisa, Kudzika Kwemhedzisiro inosanganisira mamwe mabasa, maturusi uye sarudzo izvo zvichaita kuti chifananidzo chedu chinyanye kurova, kunyangwe ini ndisina chokwadi kuti izvi ndizvo zvatiri kufarira kana tichitsvaga mhedzisiro yekuwana mhedzisiro isina chero mhando yekuwandisa.
Tinogona kutenga Yakadzika Mhedzisiro muApp Store ye mutengo we € 3.99.
PortraitCam • Yekupedzisira Kamera5,49 €
Ndeipi yeiyi matatu sarudzo yaunofarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Portrait mhedzisiro yeiyo iPhone 7 Plus pane chero imwe iPhone, zvinogoneka nekuda kweizvi maapp
Kune imwe inonzi Tadaa HD Pro kamera.
Inoita zvakafanana, ine mask yakanaka, uye ndeye mahara.
Kunze kwezvo, iwe une mufananidzo wekugadzirisa mabhonasi.
Kuyambuka Kwemhuka kweIOS kunonoka; ichasvika kubva muna Kubvumbi